China Model No: Chinese Nlụpụta Akpaaka Control Y81 Series Hydraulic Scrap Metal Press Aluminium Baler Machine maka Metal Press Recycling factory na suppliers | Jikọọ Top
.Dị Y81 usoro
Nsogbu hydraulic 100-3000 Tọn
Nha Bale 300 * 300 mm ma ọ bụ Omenala
Nha ụlọ 1200 * 600 * 700 mm ma ọ bụ Omenala
Out-bale ụzọ Gaa n'ihu balePụgharịa balePụpụta bale
Ọrụ Ntuziaka ma ọ bụ PLC njikwa
Hydraulic scrap metal press baler igwe nwere ezigbo uru maka metal imegharị ihe maka ụlọ ọrụ. N'oge a, ụkọ nke ihe ndị dịnụ bụ nsogbu mba ọ bụla na-eche ihu. N'agbanyeghị mba na-emepe emepe ma ọ bụ mba ndị mepere emepe, otu esi emegharị kachasị mma bụ isiokwu dị ọkụ. Ya mere, anyị na-echepụta ụdị igwe dị iche iche nke hydraulic metal maka ndị ahịa anyị iji mesoo ha ihe mkpofu iji mezuo ihe ndị ahịa anyị chọrọ.
Hydraulic metal baler nwere ike rụọ ọrụ nke ọma nile di iche iche nke metal iberibe, ígwè shavings, ígwè mpempe akwụkwọ, aluminum, ọla kọpa na ndị ọzọ ruru eru Nchaji afanyekwa n'ime a akụkụ anọ, cylindrical, octagonal udi andother shapes iji belata na-eri nke njem na gbazee na ike melite ọsọ nke oku.
Hydraulic drive, ezigbo ọrụ na enweghị mkpọtụ, ngwa ngwa ngwa ngwa, nnukwu ikike extrusion, ngọngọ kọmpat, ọ dịghị mfe ịgbasa.
Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ike eletriki ma ọ bụ igwe na-arụ ọrụ mmanụ diesel, igwe ikuku diesel ga - enyere gị aka ị nweta igwe ịpị mkpanaka.
A-● Igwe akụrụngwa haịdrọlik nwere ike inyere gị aka ịchekwa ọrụ, melite mgbake igwe, bulie ọnụahịa ire ma melite uru.
Hydraulic Scrap Metal Baler Machine Nkọwa ：
Elu ọnụ Force (Ton)
Ọnụ ụlọ (L × W) mm Bale nha (L × W) mm Ike (KW)
Anyị Hydraulic Scrap Metal Baler Machine na-enye omenala ama ika igwe akụkụ, anyị na e na-ekwenyere ọtụtụ ụwa a ma ama ika soplaya, dị ka SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI na na ihe karịrị afọ 10.
Anyị haịdrọlik metal baler igwe na ọtụtụ-eji na-eso ụlọ ọrụ:
● Metal imegharị ihe maka iji ụlọ ọrụ, anyị haịdrọlik metal baler igwe nwere ike ime ka scrap metal n'ime square bales,
Rap Scrap ụgbọ ala dismantling ụlọ ọrụ, anyị haịdrọlik metal baler igwe na ọtụtụ-eji maka ịpị scrap ụgbọ ala ahụ.
● Metal foundry na gbazee ụlọ ọrụ, ụfọdụ ulo oru scrap metal ma ọ bụ metal mgbawa n'oge mmepụta nwere ike-enwe.
● Akụrụngwa akụrụngwa. Productsfọdụ ngwaahịa iberibe igwe nwere ike ịpị anyị igwe hydraulic metal baler igwe.
Industry Machinery nhazi ụlọ ọrụ. Nkwakọ ngwaahịa na mkpokọta nke mkpofu, irighiri ihe, ntụ ntụ na ihe ndị ọzọ nwere nnukwu enyemaka na gburugburu ebe obibi ahụ, imegharị ihe mkpofu na iji ọrụ mmadụ.
Anyị ga-eji ngwugwu ihe nkiri fụchie na nkwakọ osisi iji kpuchido igwe akpụrụ mmiri anyị.
Lelee igwe igwe eji egwu mmiri maka imeghari ihe n'ime ihe!
Nke gara aga: Model No: Chinese rụpụta Automatic Control Y83 Series Hydraulic Metal Mgbawa Briquetting Press Machine maka Metal imegharị ihe maka iji
Aluminom Baler Machine
Kwụ Baler Aluminium Scrap Press Machine, Agụba Shear Maka Mobile Digger, Hydraulic Baler / Aluminium Nwere Ike Press Machine, Mpempe akwụkwọ Metal Baler, Ọla kọpa Scrap Baler, Metal Powder Briquette Machine,